KUSVIRA MITAMBO-TAKUMI AUTO CHIKAMU
Takumi waya inoseta kwese kwese here?
Takumi waya maseti akajairwa kugadzirwa kune iwo chaiwo matanho eiyo application. Iko hakuna kwepasirese seti. Pamusoro pezvo, yega yega Takumi waya yakanyorerwa iyo yakasarudzika nhamba yesirinda kune ingangoita benzi-chiratidzo kumisikidzwa.
Chii chinonzi kusiyanisa tambo waya?
Takumi inoshandisa tambo inoshanduka kuti igadzire kupokana kunodiwa kusefa RFI inogadzirwa neinoshanda yekuvesa system. Iyo inowirirana nenamo sisitimu inoshandura yakasimba ronda uye isina kusununguka ronda waya yemhangura yakatenderedza pakati peiyo plug waya kuti iite magnetic field, ichigadzira inofanirwa kuramba nekamukana keiyo impedance inowanikwa mune yakasimba kabhoni yakakosha mhando tambo yakaiswa.
Tambo dzeTakumi 8 mm here?
Takumi waya inogadzirwa kune chaiwo masenduru eOEM waya. Tambo zhinji dzeTakumi dziri 7mm, nepo Toyota zvinoshandiswa zviri 5mm pazvinoshanda. Yakawanda waya ye8mm mune yekumaketeteni iri kungo wedzera kuwedzera kuputira, uye haiwedzere kugona kwemagetsi kwenzira yekutsvaira.
Chii chinonzi RFI?
Radio Frequency Interference (RFI) kana "ruzha" rwemagetsi zvinokonzerwa nemaitiro emoto, ma alternator, wiper mota, nezvimwe. Ruzha urwu runogona kukonzeresa mashandiro emaredhiyo, zvigadzirwa zvemagetsi, masisitimu ejekiseni emafuta, vanowana pakadzika, uye zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi. Resistor plugs, waya uye spark plug cap zvinoshandiswa seRFI yekudzvanya system kudzikisira ruzha urwu.